၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ KIA တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဆွေးနွေး
ကချင်ပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြအေး ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ဒီကနေ့ လိုင်ဇာမြို့မှာ KIA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။
KIA နဲ့တွေ့ဖို့ ကချင်ပြည်နယ်ကို ရောက်ရှိနေကြတဲ့ ကိုမြအေးခေါင်းဆောင်သည့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေပုံ
ကိုမြအေး ဦဆောင်တဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ဟာ ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို သွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်မှာ ကိုမြအေးနဲ့အတူ ကိုထွန်းမြင့်အောင်၊ မနီနီလွင်နဲ့ မစန်းစန်းမော်တို့ လိုက်ပါသွားကြပါတယ်။
မနေ့တုန်းကလည်း ကိုမြအေးတို့အဖွဲ့ဟာ ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်အပါအဝင် KIA တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီး ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်တွေအတွင်း ကချင်ပြည်နယ်မှာ မြန်မာအစိုးရတပ်တွေနဲ့ KIA တပ်တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေ အရှိန်မြင့်တက်လာနေတဲ့အပေါ် နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ အမြန်ဆုံးရပ်ဆိုင်းပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြဖို့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့က ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ရက်နေ့က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုထားပါတယ်။
အခုခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုမြအေးကို RFA ကိုနေရိန်ကျော်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
MA KHIN CHO KHINE
PLEASE WRITE BOTH SIDE OF MIND.
KIO wanted Burmese Union army stay away to administrate Kachin domain. Why? Kahin state also Myanmar domain and Union army need to control for security nobody should be instead. Why they can't pass Union army to take position, . One example China teak thiefs are in and out by their will without caring anybody. Why take responsibility? How about the people , they can't stay peacefully from the time of KIA began. Now refugees, accidentially may be killed by war which is continuously by will of Kachin warlords.
Jan 05, 2013 07:11 AM
Jan 04, 2013 02:43 PM